မကြာသေးမီက browsers များအတွက်စျေးကွက်ဝေစုကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်စစ်ပွဲများတွင်မည်သူအနိုင်ရနေသည်၊ Firefox သည်အရှိန်အဟုန်ကိုဆက်လက်တိုးမြှင့်နေပြီး Safari ကအထက်သို့တက်နေသည်။ ဒီသုံးခုကိုဖြစ်ပျက်နေတဲ့ငါ့ရဲ့သီအိုရီတွေနဲ့မှတ်ချက်ပေးချင်ပါတယ်။
စျေးကွက်လည်းပြောင်းလဲနေသည်။ ActiveX အားလုံးသေပြီ ဖြစ်၍ Ajax သည်မြင့်တက်နေပြီး Firefox ကဲ့သို့သော browser များသို့သူကိုယ်တိုင်ချေးငှားသည်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ Internet Explorer ကိုသုံးဖို့အကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ IE ကလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင် Firefox ကပိုကောင်းအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Windows Updates သည် browser ကိုသုံးရန်လိုအပ်သော်လည်းယခုသူတို့သည်၎င်းကိုမပါဘဲ load နှင့် install လုပ်နိုင်သည်။
Firefox သည် Microsoft ၏ IE7ကဲ့သို့အသုံးပြုရလွယ်ကူမှုနှင့် layout ကိုစွန့်လွှတ်။ သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် IE6မှ Firefox သို့လွယ်လွယ်ကူကူကူးပြောင်းနိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးသည် ၎င်းသည်ကြော့။ မြန်ဆန်ပြီးချောမွေ့သည်။
Mac ၏အိမ်တွင်း PC ဈေးကွက်သို့မကြာသေးမီကဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင့်တက္ကသိုလ်များ၊ အမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးများအတွက် PC တော့မဟုတ်တော့ပါ။ ကျွန်တော့် Mac အသစ်မှာ OSX, Windows XP (Parallels နှင့်အတူ) လည်ပတ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်ရှိ browser တိုင်းကိုဒီဇိုင်းဆွဲ။ တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Safari ကိုကြိုတင်ထည့်သွင်းထားခြင်းဖြင့် Macs သည်ရှယ်ယာများရရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ရှယ်ယာတိုးပွားလာမည်မှာသေချာသည်။ ကျနော့်ခန့်မှန်းချက်ကတော့ Safari က Firefox ကိုရှုံးနိမ့်လိမ့်မယ်။
မိုက်ကရိုဆော့ဖ်ဟာအတော်လေးခြိမ်းခြောက်ခံရတယ်လို့ခံစားရရမယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသူတို့ကိုယ်ပိုင်အမှားပဲ။ ၄ င်းတို့သည်ကိုယ်ပိုင်ဘရောင်ဇာများ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသောအသုံးပြုသူများ၊ သီးခြားဒီဇိုင်နာများ၊ စိမ်းလန်းစိုပြေသော developer များနှင့်အခြားသူများကို၎င်းတို့ကိုအခြားဒေါင်လိုက် (မိုဘိုင်း) တွင်အသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။
Internet Explorer သည်မိမိကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးရုံသာဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေဘယ်မှာရောက်နေတယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။
Firefox ကို download ချပြီး install လုပ်ပြီးလျှင်၊ သွားပါ Add-ons တွေကို သင်၏နှလုံးပါ ၀ င်သည့်အရာများကိုကူးယူပါ။ ဤသို့ပြုသူမည်သူမဆိုအတွက်၊ သင့်ကို browser ကို ၂ ပတ်လောက်အသုံးပြုဖို့ခဏလေးပေးပါ။ ပြီးတော့ကျွန်မရဲ့ site ကိုပြန်သွားပါ၊ မင်းခင်ဗျားရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုပြောပြပါ ဦး ။
Tags: browser ကိုစစ်browser များfirefox ကိုieအင်တာနက်ရှာဖွေသူ 7microsoftnetscape navigator ဖြစ်သည်
IE ကိုသုံးစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့သဘောတူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ကံမကောင်းတာက ကမ္ဘာကြီးဟာ ပိုကောင်းမှန်းမသိတဲ့အင်တာနက်အတွေ့အကြုံမရှိသေးသူတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါသေးတယ်။ နှုတ်ထွက်စကားက နောက်ဆုံးမှာ ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ကျွန်ုပ်သည် Firefox ကို ပျော်ရွှင်စွာ အသုံးပြုသူ ဖြစ်နေသည်မှာ နှစ်အတော်ကြာနေပြီ ဖြစ်သည်။ မရေမတွက်နိုင်သော တိုးချဲ့မှုများနှင့် Internet Explorer တွင် လုံခြုံရေး တိုးမြှင့်မှုကြောင့် ၎င်းကို နှစ်သက်သည်။
ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ကျွန်ုပ်၏ MacBook Pro အသစ်ကိုရရှိသောအခါ၊ Safari ကို ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာအောင် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း Firefox သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်။ စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအတွက် ရွေးချယ်စရာများသည် အကန့်အသတ်မရှိသလောက်ဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သောနှစ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏မိသားစုတစ်ခုလုံး (နှင့် ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းအများစု) ကို Firefox သို့ အောင်မြင်စွာပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ပါသည်။
ပေါလုသည် ကျွန်ုပ်အား အရှက်ရစေလိုခြင်းမရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် ကျွန်ုပ်၏ phobias ကို philes အဖြစ် ပြုပြင်ထားသည်ကို သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော့်ကို အီးမေးလ်ပို့ရလောက်အောင် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ Paul ဆီက ဖမ်းစားလိုက်တာ။ ကျွန်တော်သိတဲ့လူက အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျင်တဲ့သူဆိုတာ သိပါတယ်။ သင့်ကိုယ်သင် ရှက်ရွံ့ခြင်းမှ ကယ်တင်မည့် သူငယ်ချင်းကောင်း ဖြစ်သည် ။
Paul တွင် အလွန်ကောင်းမွန်သော ဘလော့ဂ်တစ်ခုရှိသည်။
Firefox သည် IE7သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် အောင်နိုင်မည်ဟု လုံးဝသဘောတူပါသည်။
ရိုက်နှက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းမှာ Firefox Plugins နှင့် Firefox Add-ons တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
2007 ခုနှစ် ဇူလိုင်လမှာ IE က 35% မှာ ရပ်တည်နိုင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
Assalamu၊ Fazal။ ကျွန်တော်သင်နှင့်သဘောတူသည်! Firefox3Alpha ထွက်နေပြီဖြစ်သောကြောင့်၊ Mozilla သည် Microsoft နှင့်မယှဉ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းကို တောက်လောင်နေသည်။
IE7 ကိုကျွန်ုပ်၏ဒက်စတော့ကွန်ပြူတာတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးအချို့နှင့်ပြေလည်သွားပြီးနောက်၎င်းသည်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်သော်လည်းကျွန်ုပ်၏လက်ပ်တော့တွင်ထည့်သွင်းသောအခါအရာအားလုံးရပ်တန့်သွားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ပရိုဂရမ် (အပိုပရိုဂရမ်မပါသော) အပိုပစ္စည်းများအောက်တွင် ကျွန်ုပ်၏ပရိုဂရမ်များပါ၀င်ကြောင်းကို ကျွန်ုပ်မတွေ့ခဲ့ပါက ကျွန်ုပ်သည် လုံးဝဆက်၍မရနိုင်ပါ။
ကျွန်တော် စိတ်ပူပါတယ်၊ ကျွန်တော် အွန်လိုင်းမှာ ဘဏ်လုပ်ငန်းလုပ်နေပြီး Foxfire ကို သုံးနိုင်တယ်ဆိုတာ မသေချာပါဘူး။ စမ်းကြည့်ချင်ပေမယ့် အချက်အလက်ပိုလိုပါတယ်။
ခေတ်မီအွန်လိုင်းဘဏ်စနစ်သည် ဘရောက်ဆာဖြတ်ကျော်မှုနှင့်အညီဖြစ်သည်။ SSL (Secure Sockets Layer) ကို ပံ့ပိုးပေးခြင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာမှာ သင့်ဘရောက်ဆာနှင့် ဘဏ်၏အွန်လိုင်းဆာဗာများအကြား ဒေတာဆက်သွယ်ခြင်းအတွက် ကုဒ်ဝှက်ထားသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Firefox သည် အကန့်အသတ်မရှိ IE ကဲ့သို့ SSL ကို အပြည့်အဝထောက်ခံသည်။ SSL ကို သင်အသုံးပြုနေကြောင်း သိနိုင်စေသည့် အထင်ရှားဆုံးနည်းလမ်းမှာ သင်သည် https:// လိပ်စာအစား ရောက်နေခြင်းဖြစ်သည်။ http://. သို့သော်၊ IE နှင့် Firefox နှစ်ခုလုံး (နှင့် Opera နှင့် Safari) တွင် SSL လက်မှတ်နှင့် ကုဒ်ဝှက်ခြင်းတို့သည် တရားဝင်ပြီး မှန်ကန်စွာ အလုပ်လုပ်သည်ဟူသော အမြင်ဆိုင်ရာ အညွှန်းများနှင့် အတည်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များလည်း ရှိသည်။
တစ်နည်းဆိုရသော် သင့်တွင် ပြဿနာတစ်စုံတစ်ရာမရှိသင့်ပေ။ သင့်ဘဏ်၏ "ပံ့ပိုးကူညီမှု" စာမျက်နှာကို ၎င်းတို့ Firefox ကို ပံ့ပိုးခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးရန် မည်သည့်အခါမျှ မနာကျင်ပါ။ ၎င်းသည် ကောင်းမွန်သောဘရောက်ဆာတစ်ခုဖြစ်သည် - အပိုလက်ဆောင်များစွာဖြင့် အလွန်လျင်မြန်စွာတွေ့ရပါမည်။
လာရောက်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... နှင့် မှတ်ချက်ပေးခြင်းအတွက်။
နိုဝင်ဘာလ3ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 5:50 နာရီ
Firefox သည် ဒေါင်းလုဒ်ပေါင်း သန်း 400 ကို ကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီး၊ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ အခြားရွေးချယ်စရာများသည် အမြဲတမ်းတိုးတက်မှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါပေမယ့် ဘရောက်ဆာစစ်ပွဲကို အနိုင်ရတာက ... အဲဒါအတွက် စောနေပါသေးတယ်။
နိုဝင်ဘာလ3ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 11:24 နာရီ
ကျွန်တော် IE ကို နှစ်အတော်ကြာ အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့ပြီး Firefox ၏ အသုံးပြုသူအဆင့် အားသာချက်များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ အသုံးပြုသူအများစုသည် ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဟု သံသယဖြစ်မိသည်။ သို့သော် IE7၏ပြောင်းလဲမှုများသည် အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ 21 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 8:11 နာရီ
IE7 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မင်းရဲ့အတွေးအမြင်ကို ငါသဘောတူပြီး ဝဘ်ဒီဇိုင်နာတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် IE7 ကိုထွက်ရှိတဲ့အခါ အနည်းငယ်စိတ်ပျက်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည် လက်ရှိတွင် ဝဘ်ဆိုက်အသစ်တစ်ခုကို တည်ဆောက်နေကာ divs နှင့် ပြဿနာအချို့ကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော်လည်း ကြီးကြီးမားမား တစ်စုံတစ်ရာ (ယခုအချိန်အထိ) မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည် IE7 ကို အနည်းငယ်မျှသာ အသုံးပြုဖူးသော်လည်း CSS ပံ့ပိုးကူညီမှုအား ကိုးကား၍ 6.0 မှ ကြီးမားသောခုန်တက်မည်ဟု မျှော်လင့်နေပါသည်။
ကျွန်ုပ်သည် Firefox အသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့သည်မှာ နှစ်အတော်ကြာပြီး လမ်းတစ်လျှောက်တွင် အသုံးပြုသူအသစ်အနည်းစုကို ခေါ်ယူခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်နှင့် အခြား FF အသုံးပြုသူများစွာကို စွဲဆောင်နိုင်ဆုံးအရာမှာ ၎င်းသည် အလွန်ဝဘ်ဒီဇိုင်နာ/ဆော့ဖ်ဝဲရေးသားသူနှင့် လိုက်ဖက်ညီပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်းသည် ၎င်းကို တွန်းအားပေးသည့်အချက်ဖြစ်သည်။ IE သည် ဆက်လက်ကျဆင်းနေဦးမည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သည်၊ ဤအချိန်တွင် Microsoft သည် အံ့ဖွယ်ကောင်းမှုတစ်ခု လိုအပ်လိမ့်မည်ထင်ပါသည်။ Firefox ၏ အရှိန်အဟုန်နှင့် Safari သည် တဖြည်းဖြည်း တိုးလာနေသည်၊ IE ကို ကျော်လွန်နေပြီး ဝဘ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့် ကိုက်ညီသော ဘရောက်ဆာကို ထုတ်လုပ်ရန် တိုတောင်းနေသဖြင့် ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အား အနည်းဆုံးတွင် အထောက်အကူမပြုပေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဒီဇိုင်နာများသည် ၎င်းတို့ကို အခွင့်အရေးများစွာ ပေးရုံသာ 😛
ဤမှတ်ချက်များသည် အထင်အမြင်လွဲမှားစေပါသည်။ ကျွန်တော်တွေ့ဖူးတဲ့ လတ်တလော ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေအရ IE ရဲ့ ရှယ်ယာဟာ Q85.884အတွက် 2005% မှ 78.5% သို့ Q3 2007 အတွက် 7.3% အထိ ကျဆင်းသွားပါတယ်။ ဒါဟာ နှစ်နှစ်ခန့်အတွင်း XNUMX% ကျဆင်းသွားပါတယ်။
ဤအတောအတွင်း၊ Firefox သည် တစ်ချိန်တည်းတွင် 9% မှ 14.6% အထိ ချဲ့ထားသည်။ ဒါဟာ နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ 5.6% တိုးလာပါတယ်။
Safari သည် 3.1% မှ 4.77% သို့ တိုးလာသည် - ပြောရန်မလွယ်ကူသော တိုးလာပါသည်။
ဟုတ်ကဲ့ Firefox သည် IE တွင်ရရှိနေသော်လည်း IE တွင်အသုံးပြုသူ5ဆကျော်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ဤကိန်းဂဏန်းများသည် Wikipedia “Usage_share_of_web_browsers” မှဖြစ်ပြီး သေချာသည်မှာ တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်း ဘက်လိုက်နိုင်ပါသည်။
ဝဘ်ဒီဇိုင်နာများ မည်သို့တွေးသည်ကို ကမ္ဘာအများစုက ဂရုမစိုက်ကြပုံရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်များကို စိတ်ပူမည့်အစား လူအများအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲသင့်သည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။
Rick ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိန်းဂဏာန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏ရင်းမြစ်များ မည်သည့်နေရာတွင် ရှိနေသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မေးနိုင်ပါသလား။
ငါမင်းကိုသဘောတူပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဝဘ်ဒီဇိုင်နာတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ဂရုမစိုက်မိဖို့ သတိပေးစရာပုံပြင်တစ်ခုရှိတယ်... ပြီးတော့ 85.88% စျေးကွက်ဝေစုကိုနှစ်သက်ဖို့အတွက် စံချိန်စံညွှန်းအပြင်ဘက်မှာ ဒီဇိုင်းဆွဲရတဲ့အခါ အဲဒါက ဝဘ်ဒီဇိုင်းက စျေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ဆက်ရှိနေဦးမှာပါ။
နိုဝင်ဘာလ 22 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 2:25 နာရီ
လူအများအတွက် ဒီဇိုင်းဆွဲရန် အမြဲတမ်း ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နေသော်လည်း Microsoft သည် အခြားသူများနှင့် မလိုက်လျောပါက ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များကို ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။ တစ်ခါတရံမှာ IE တစ်ခုတည်းအတွက်ပဲ သီးခြားစတိုင်စာရွက်တွေကို ရေးတတ်သလို အချိန်ကုန်လည်း သက်သာစေပါတယ်။ သာမန်အသုံးပြုသူအတွက် ဘာမှ အဓိပ္ပာယ်မရှိပါဘူး။ pack ကိုဦးဆောင်သည့်ဘရောက်ဆာသည်ဝဘ်စံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီမှုအနည်းဆုံးဖြစ်သောအခါစိတ်ပျက်စရာဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာလ 22 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 3:44 နာရီ
ဒီဇိုင်နာအမြင်ကနေ မင်းရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကို ငါငြင်းဆိုစရာမရှိဘူး၊ မင်းဘာကြောင့် မင်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက် လူတွေကို ပိုကောက်ခံရတာကို မင်းဘာကြောင့်စိုးရိမ်ရမလဲဆိုတာ ငါသေချာမသိဘူး။ အဲဒါကို လူတွေက ပေးချေဖို့ အဆင်သင့် မဖြစ်ဘူးလား။ ဒါတွေက နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေကို ကျော်လွှားရမယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။
IE နှင့်ဝေးရာသို့ ကြီးမားသော ရွေ့လျားမှုတစ်ခု ရှိနေသည်ဟူသော အကြံပြုချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်တော် ပြဿနာတက်ပါသည်။ ကိန်းဂဏန်းများ (ငါပြောနိုင်သလောက်) သည် အခြားနည်းဖြင့် တောင်းဆိုသော ဒီဇိုင်နာများနှင့် SEOs များအားလုံးနှင့် FF ကို အဆုံးမသတ်အောင် မြှင့်တင်သည့်ကြားမှ အဆိုပါတောင်းဆိုမှုကို မထောက်ခံပါ။ ၎င်းတို့သည် ၎င်းကို အရောင်းမြှင့်တင်သင့်သည်ရှိမရှိသည် အခြားမေးခွန်းဖြစ်ပြီး ၎င်းနှင့်ပတ်သက်၍ သင်လုံးဝမှန်ကန်ပေမည်။
ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ ကျွန်ုပ်၏အရင်းအမြစ်သည် Wikipedia ဖြစ်သည်—အထင်ကြီးစရာကောင်းဆုံးသောအသံထွက်အရင်းအမြစ်မဟုတ်သော်လည်း၊
နိုဝင်ဘာလ 23 ရက် 2007 ခုနှစ် ညနေ 5:42 နာရီ
Rick က ကိစ္စနှစ်ခုစလုံးမှာ သင်မှန်ကောင်းမှန်နိုင်ပါတယ်။ IE သည် Operating System ၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သောကြောင့် စျေးကွက်၏ အဓိကဝေစုကို ဆက်လက်ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ကျွန်တော် စောဒကတက်ချင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဒေါင်းလုဒ်အတွက် ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါက၊ FF သည် ၎င်းတို့၏ တင်ပါးများကို ကန်မိလိမ့်မည်ဟု ကျွန်တော် အမှန်တကယ် ယုံကြည်ပါသည်။
ကျွန်တော် programmer နဲ့ web developer ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ 2003 တုန်းက မတော်တဆမှုတစ်ခုနဲ့ ခေါင်းကို ထိသွားတယ်။ ကုဒ်ရေးတာက ငါ့အတွက် အရမ်းများနေပြီ၊ ငါက သာမန် joe ပဲ..lol
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ငါ Linux ကို 1996 လောက်ကတည်းက သုံးနေတာ ( Caldera က2ရက်လောက် သူ့ဘာသာသူ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားခဲ့ရတာကို သတိရပါ ..lol)။ Firefox မတိုင်မီ ဝဘ်ဘရောက်ဆာများသည် ၎င်းအတွက် ဘယ်သောအခါမှ ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိပါ။ Firefox ထွက်လာသောအခါ၊ ၎င်းသည် Linux အသုံးပြုသူများအတွက် (Thunderbird လည်းဖြစ်သည်)။ Microcrap သည် Linux အသုံးပြုသူများကို အမြဲတမ်း လှည့်စားနေသောကြောင့် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ခြေထောက်ဖြင့် ပစ်သတ်ခဲ့သည်။ Firefox/Thunderbird သည် Linux အတွက် ထိပ်တန်းအင်တာနက်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်လာသည်ကို မှတ်မိပါသည်။ ၎င်းသည် ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်ပါ၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သည့် extension များကိုမဆိုထားနိုင်သည် (adblockl!) ထို့ကြောင့် သင်ပြုလုပ်သလောက် ပေါ့ပါးသည် သို့မဟုတ် လေးလံသည်။ မလိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ လုံးဝမရှိပါ။ တဲဘ်များသည် အေးမြပြီး သေးငယ်သည်။
ကျွန်တော် အခုလောလောဆယ် Window xp ကို သုံးနေပါတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီမှာ 'အခြားသူတွေ' က ဒီ pc ကိုဝယ်ဖို့ အခြေအနေတစ်ခု လုပ်ထားတာကြောင့် 'သူတို့' က အဲဒါကို သုံးလို့ရတယ် (idiots)။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်သည် firefox/thunderbird ကိုချက်ချင်းဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော် Windows ကိုထပ်သုံးတဲ့အခါ Outlook express ကိုမုန်းခဲ့ပြီး Firefox ရဲ့ extensions တွေနဲ့အတူ (ကျွန်တော် config. ဖိုင်တွေနဲ့ ကျွန်တော့် bookmarks အားလုံးကို Linux ကနေသိမ်းပြီး Winxp ထဲကို သွင်းလိုက်တာပါ)။
မကြာသေးမီက၊ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ပျူတာသည် ညတွင်းချင်း ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင် ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်သော ကြီးမားသောတက်ဘ်များပါရှိသော ဤ ALIEN ၏ အဆီဓာတ်တူးလ်ဘားကို ကျွန်ုပ်တွင် ရှိပါသည်။ ဖရီးဂျင်တူးလ်ဘားများသည် ပျက်စီးနေသောမျက်နှာပြင်၏ 1/5 ကို ယူသည်။ ငါမုန်းတယ်! တခြားလူတိုင်းလည်း မုန်းတီးကြပါတယ်။ STOP ခလုတ်က ဘယ်မှာလဲ ဘရောက်ဆာကို ဒီလောက်နေရာယူထားဖို့ ဘယ်သူမှ မလိုချင်ပါဘူး။ စာမျက်နှာ ၁ မျက်နှာသာရှိသော်လည်း ကြီးမားသော တက်ဘ်များ။
ဝဘ်စာမျက်နှာကော။ သင်မြင်သမျှ BROWSER ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းကိုပင် သင်မမြင်နိုင်ပါ။ စိတ်ရှုပ်စရာတွေ သည်းမခံနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ Microsoft တွင် အဆင်ပြေစွာ တိုင်ကြားရန် နေရာမရှိပါ။ ရှုပ်ပွနေသောအမှိုက်ပုံကြီး။ ကျွန်ုပ်၏ မျက်နှာပြင် ရုပ်ထွက်အား 1152×864 တွင် သတ်မှတ်ထားပြီး 800×6000 တွင် မည်သို့မည်ပုံ ဖြစ်လာမည်ကို ကျွန်ုပ် စိတ်ကူးမယဉ်နိုင်ပါ။ စာမျက်နှာကိုတောင် မြင်နိုင်ပါ့မလား။
ဒါကြောင့် IE2 အတွက် လက်မ7လက်မ လျှော့ပါ။ လူတိုင်းမုန်းတီးပြီး IE ၏သေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ရယ်စရာကောင်းပါတယ်၊ သူတို့မှာ အဆင်ပြေတဲ့ browser တစ်ခုရှိပေမယ့် Firefox ကို ကူးယူခြင်းအားဖြင့်၊ သူတို့မှာ အမှိုက်တွေ ရှိနေပါပြီ။ ပြောချင်တာက.. toolbars ပေါ်က အပျက်အစီးတွေ ဘာတွေလဲ၊ ကျန်တဲ့ ခလုတ်တွေက ဘယ်မှာလဲ??
ထို့ကြောင့်၊ Microsoft ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်သည် နောက်ဆုံးတွင် သင်ကိုယ်တိုင် ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ယခု ကျွန်ုပ်သည် ဖုန်းခေါ်ဆိုသော အခြားသူများအား ၎င်းတို့၏ဘရောက်ဆာ အဘယ်ကြောင့် ရုတ်တရက် ဆိုးရွားပြီး ရှုပ်ထွေးသွားသည်ကို ရှင်းပြကာ IE7 ကို ဖြုတ်ရန် ကူညီပေးပါ။ ဘယ်သူမှ မလိုချင်ဘူး!
ငါ့ရဲ့ကွန်ပြူတာမှာ Firefox သုံးနေတာ တစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီမို့ နောက်ကိုပြန်မကြည့်တော့တာ မင်းမှန်တယ်ထင်တယ်ဗျာ၊ ကွန်ပြူတာဆော့ဖ်ဝဲလ်အကြောင်း သိသူတိုင်းက Firefox သည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဘရောက်ဆာဖြစ်ကြောင်း သင့်အား ပြောပြနိုင်ပါသည်။ Office Enterprise ရှိ Outlook 2007 သည် အလွန်ကောင်းမွန်ပြီး ကျွန်ုပ်အတွက် ကောင်းမွန်သောကြောင့်၊ Thunderbird ဆော့ဖ်ဝဲကို ကျွန်ုပ် တစ်ခါမျှ မစမ်းဖူးပါ။ မပြိုကွဲရင်ဘာလို့ပြောင်းတာလဲ။ IE 6-7 သည် ပျက်သွားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည် သူငယ်ချင်း၊ မိသားစု၊ အွန်လိုင်းမိတ်ဆွေ သို့မဟုတ် Firefox ကိုရယူရန် ၎င်းတို့အား အမြဲထည့်သွင်းရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့အား အကူအညီရယူလိုသူကိုသာ ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်သည့်အချိန်တိုင်းတွင် IE XNUMX-XNUMX ပျက်သွားပါသည်။ ဒါဟာ ငါ့စာအုပ်ထဲမှာ ဉာဏ်မမီပါဘူး။
Microsoft က သူတို့ဘာကြောင့် သာလွန်တဲ့ဘရောက်ဆာကို ထုတ်လိုက်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တာလဲ၊ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်က ကမ္ဘာနဲ့ လုံးဝ အဆင်မပြေဘူးလား။ သူတို့ရဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလ်က အရမ်းမိုက်လို့ လူတွေကပဲ သုံးချင်ကြလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် Microsoft က တစ်ရက်ကို ဘီလီယံနဲ့ချီပြီး ငွေရှာနေတာကြောင့် “စားသုံးသူကို ငါတို့ သူတို့ထင်တာကို ဂရုမစိုက်ဘူး” လို့ ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့် စျေးကွက်မှာ တန်ဖိုးမဲ့ပြီး တုံ့ပြန်မှုမရှိတဲ့ ဘရောက်ဆာကို အတင်းအကြပ်လုပ်ခိုင်းတာကြောင့်ပါ။ အဲလိုမျိုး! ကျွန်တော့်မှာ အစုတ်ကွန်ပြူတာတစ်လုံးရှိတာနဲ့ မတူပါဘူး၊ IE က ဘယ်စနစ်မှာမဆို မိုက်မဲနေသလိုပါပဲ။ ၎င်းသည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုဒ် သို့မဟုတ် တစ်ခုခုတွင် ရှိရပါမည်။
အပျော်သဘောသက်သက်နဲ့ အံ့ဖွယ်တစ်ခုခုကြောင့် တိုးတက်ခဲ့သလား (မဟုတ်ဘူး) မိုက်နေသေးလားဆိုတာ ကြည့်ဖို့ ဒီနေ့ပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ထို့နောက် “ဘာကြောင့် ဒီလိုမျိုး လည်ပတ်နေရတာလဲ” လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ပြောလိုက်တော့ (အင်တာနက် Explorer က ဘာကြောင့် ဒီလောက်နှေးကွေးနေရတာလဲ) လိုက်ရှာပြီး Firefox မှာ Google ပင်မစာမျက်နှာ ရှာဖွေမှုကို သုံးခဲ့တယ်။ ဤကဲ့သို့သောဆောင်းပါးပါသောအခြားဆိုက်မှလင့်ခ်ကိုလိုက်နာပြီးနောက်ဤနေရာတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်ဘက်က ခြေရာခံပြီး အဖြေမရသေးပါဘူး။ Firefox Go ကိုသွားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘီလ်ဂိတ်ကို လူတစ်ဦးလျှင် တစ်ကြိမ်စီ အဆက်မပြတ် ကန်သွင်းပါ။ မှတ်ဉာဏ်သုံးစွဲမှု ညံ့လို့ FF ကို ပြန်ဆွဲတာ တစ်ခုတော့ မှတ်သားထားမယ်။ လွယ်ကူစွာ ပြုပြင်ထားသော အတွေး၊ အမြန်၊ နှေးနှေးဖြင့် ပြန်လည်စတင်ခြင်းသည် ၎င်းကို ဖြေရှင်းပေးလိမ့်မည်။